SAWIRO: Weerar Ismiidaamin ahaa oo lagu qaaday Hoteel Ambaasadoor – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRO: Weerar Ismiidaamin ahaa oo lagu qaaday Hoteel Ambaasadoor
MAREEG 1 June 2016
Muqdisho (Mareeg)—Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay Weerar Ismiidaamin ahaa oo lagu qaaday Hoteelka Ambaasadoor oo ku yaalla Wadada Maka Al Mukarama ee bartamaha Magaalada Muqdisho.
Weerarkan Ismiidaaminta ahaa ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 10 Ruux, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tobanaan kale, kuwaasi oo la dhigay Isbitaalada Magaalada Muqdisho.
Hoteelkan ayaa waxaa lagu dhuftay Gaari walxaha Qarxa laga soo buuxiyay, kadibna waxaa gudaha u galay ilaa iyo 3 Dagaal yahan oo xiran sida la sheegay suumanka qarxa.
Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la Dilay mid ka mid ah Dagaal yahanadi Hoteelka Weerarka ku qaaday.
Labo Ruux oo hubeysan ayaa la sheegayaa in ay weli ka dagaalamayaan gudaha Hoteelka, weli waxaa laga maqlayaa rasaas maadaama Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Dowladda ay ku dadaalayaan sidii ay gudaha u gali la haayeen.
Dhinaca kale, Afhayeenka dhanka howlgallada ee Ururka Al Shabaab, Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab oo la hadlay Wakaalada Wararka ee Reuters ayaa sheegtay mas’uuliyada Weerarkan lagu qaaday Hoteelka Ambasadoor.
Khasaaraha dhimasho ayaa laga cabsi qabaa in uu kordho maadaama dhaawacyo aad u daran la geeyay Isbitaalka Madana ee Degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho.
Xaalada ayaa kacsan, waxaana adag in la gallo gudaha Hoteelka Ambaasadoor maadaama weli la maqlyo rasaas xoogan oo ay ridayaan Raggii gudaha u galay Hoteelka.
Qaraxan ayaa imaanaya Xili Magaalada Muqdisho lagu waday in ay soo gaaraan Wafuud caalami ah kuwaasi oo la filayo in ay ka kala yimaadaan Dalalka Turkiga, Britain iyo Talyaaniga.
Saudiarabia:The value of a contract
Dowlada Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay weerarkii Hotel Ambassador-Sawirro